महिलाहरूले पनि हस्तमैथुनबाट आनन्द- how women masturbate? ~ Khabardari.com
महिलाहरूले पनि हस्तमैथुनबाट आनन्द- how women masturbate?
पुरुषहरूजस्तै महिलाहरूले पनि हस्तमैथुनबाट यौन आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन्
। उनीहरूले पुरुषले लिङ्ग चलाएजस्तै आफ्नो योनि तथा नितम्ब चलाएर यौन आनन्द लिन्छन्।महिलाहरूले विविध तरिकाबाट हस्तमैथुन गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएका छन्। महिलाहरूले पहिले भगांकुर घर्षण गरेर यौन आनन्द प्राप्त गर्छन्, जसमा उनीहरूको ९१ प्रतिशत यौन संवेदनशीलता हुन्छ। उनीहरू आंैला वा आफूलाई सजिलो लाग्ने र बढी आनन्द दिने साधनहरूले भंगाकुर घर्षण गर्छन्। यो महिलाहरूले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने शैली हो। उनीहरू त्यसमा माथिबाट थिच्ने, केही पसाउनेजस्ता कार्यमार्फत आनन्द लिन्छन्, जसमा अत्यधिक आनन्द प्राप्त हुन्छ। महिलाहरूले हस्तमैथुनका लागि धेरैजसो औंला प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। किनभने, औंला बहुउपयोगी हुने भएकाले दबाब, गति तथा स्पर्शका विविध उपाय अपनाउन सकिन्छ, जसले यौन आनन्द थप्छ।केही महिलाले स्तन चलाएर पनि यौन आनन्द लिने गरेको तथ्य अध्ययनका क्रममा फेला परेको बताइन्छ।
Posted in: information,sex in pregnency,sex life